Mitady ny "VO COC" - Tany Masina any Vietnam
Androany tolakandro, nandositra ny reniko tamin'ny fandainga tany aminy aho fa izaho sy ireo namako dia nandeha namangy ny mpampianatra ahy hiaraka aminy sy ilay alika amin'ny lalamby lava. Hafahafa sy natahotra be ny fahatsapako taloha. Ny tanany ankavanana nitazona ny sakaosy, ary ny tanako ankavanana nangeja ny tanany havia. Samy nandeha teny amin'ny làlambe izahay roa ary nanandrana nitazona ny fandanjalanjana satria nisy mpanakanto sirosy roa tamin'ny tady hamakivaky ny vavahady mpiambina, trano mahantra avy any aoriana, fanariam-pako ary sakana fidiovana - "iray no niandraikitra" Toa tsy nisy farany ny lalana. Avy eo dia nibontsina ny alika “Manararaotra ny ho akaiky ny trano ny alika”. Raha ny alikan'ilay zazalahy tavoahangy dia nangina niaraka tamin'ny rambony teo anelanelan'ny tongony, satria fantany fa any amin'ny sehatra hafa izy io! Nilaza tamiko ny zazalahy tavoahangy fa handeha am-pahanginana tahaka ny tadin-jabo taloha arabo "Ny alika mandeha, ny mpandeha manomboka ny dia." (Les chiens aboient caravances passent).
Go! Avy eo mandeha mandrakizay! Indraindray izy dia voatery nijanona haka zavatra teny an-dàlana. Tamin'ny tolakandro, dia nentiny aho nandeha tamin'ny lalambe maloto, tsy ela dia nankany amin'ny trano mahantra iray izahay. Nisy tokotaniny iray voahodidina fehezam-boninkazo. Tranon'ny maso mamirapiratra, fanairana, talenta maritiora kely.
Tsy nampoiziko fa nijery tamim-pahatokisana ireo tanan'ny tompony henjana nefa mahery aho rehefa nijoro tamin'ny rantsan-tànana folo ny lohany - toy ny vehivavy mpandihy baleta mitsangana miaraka amin'ny tendron'ny tongotra. Saingy ny tanany, totohondry, rehefa nanao haiady tamin'ny fanaingoany izy, indraindray dia noheveriko fa ny tànany dia namaky ny tanan'ny mpangalatra, indraindray toy ny tanan'ny reny hanotra ny zanany vao teraka.
Araka ny filazany dia azo atao ny manolo-tànana ny olombelona mba hanakanana totohondry, tenda misy sampana masiaka, ary ny totohon'ny olombelona ho totohondry roa (Figure 1). Fa rehefa nosokafana ireo totohondry dia toa ranon-tantely renim-pianakaviana reny tsara fanahy izay mikarakara ny firindran'ny Yin sy anu na mikarakara ny vatan'olombelona ho dokotera ahitra mba hahita toerana mampidi-doza ao amin'ny vatan'olombelona!
Sary 1: Taratra
Saingy tena nanadinika ny taolan-tanan'ilay mpampianatra tsy mety aho. Toy ny tandroka biby vaovao ity taolana ity. Ny hato-tanana na ny kitrokely no niantsoako azy (taolana mihetsika) (Figure 2) fanavahana amin'ny kitrokeliny. (Tamin'ny 1979, novakiako ny gazety articial martiale Saigon izay namaritana an'io taolam-paty io). Voalaza fa tamin'ny fotoana nanjakan'i Qianlong (Shina), Ilay lehibe master Ngu Mai, mpanao masera iray tao amin'ny tendrombohitra White Crane dia nanao ny fomba fanaon'ny martialan'ity taolana ity. Niantso an'ity taolana ity izy "Tombo-kase" of Pluto (mpitondra ny ambanin'ny tany), midika izany Tombo-kase Pluto. Avy amin'ila "Tombo-kase" Nanafika ireo teboka mampidi-doza i Pluto sy ny lalan-drà ao amin'ny vatan'olombelona izay hosoratany amin'ny rindrina ary isaina teboka akupuncture (Sary 3).
Sary 2: Ny aretin'ny trandraka carpal
Sary 3: Ny aretin-tratran'ny carpal tunnel raha jerena ny tontolo ara-pitsaboana
Indray mandeha na indroa nipetraka izy sy nifoka sigara fantsona ary nifoka sigara nanosika ny lanitra avy eo dia nitsoka dite, nanomboka niresaka momba ny fomba nentin-drazana izay nilaza izy fa Hetsika martialana Shaolin fanatanjahan-tena.
Nilaza izy fa ny haiady anatiny no fomba fampifantohana ny hery hampiasa ny hery sy ny tendon sy ny taolana araka ny niriinay. Saingy mila manao fanazaran-tena izahay: mipetraka sy mijoro.
Sary 4: Raha tratra amin'ny teboka tsindry: isa ny teboka 1: Maty avy hatrany (eo anelanelanelanelany roa) - Teboka 2: Mandringa ny sandry roa (ny lamosin'ny satroka) - teboka fanerena 3: manaova ra mikohaka sy torana (ny soroka) - teboka fanerena 4: mandringa ny tanana rehetra (palmie manohitra ny tsindry 5) - teboka fanerena 5: mandringa ny sandry (ny tànana) - teboka fanindriana 6: manao kapoka avy hatrany (akaikin'ny lohalika) - teboka 7: fanerena (Shin) - teboka fanerena 8: mandroa mandoa sy mangetaheta (eny ambony ankihavanana - teboka 9: fanamafisana ny tongotra roa (ny ombelahin-tongony).
Hoy izy: "Mianatra ireo teknika fototra tsara alohan'ny hianarana ny haiady" izay midika izany "Bat quai chan quyen - toy ny zaza mianatra mandeha amin'ny teknika fototry ny trigram valo amin'ny haiady. Avy eo nasehony ahy ny endrika mpiasa, sabatra, scimitar…
Amin'ny maha-moanina mihira azy - na ny olona mamaky tantara sy tononkalo amin'ny hazavana manjavozavo eo amoron'ny renirano iray - dia nanao tononkalo valo tamin'ny haiady haiady izy. Nihalehibe tsikelikely niaraka tamin'ireo tononkalo tantaram-pitiavana ireo aho - tsy tao am-boanjo na sambo hankafiziko - nefa hanao fanazaran-tena ireo toerana, bibilava, technique zen mpampianatra, teknika fanaovana ody, Yin sy yang block, teknikan'ny soavaly, vatan'ny crane (fijoroan'ny tongotra tokana),… amin'ny alina volan'ny volana, avy eo volana feno… vonona handray ireo fitaomana feno fankahalana avy any amin'ny toerana hafa.
Fa ny hetsika nahaliana indrindra dia ny fetiny "Vo Coc". Ny ankamaroan'ny mpianatra dia mpangataka matihanina, zazalahy ary zazavavy, mpangataka, mpamily pedicab, mpivarotra vatomamy, mpivarotra gilasy, mpanangona fako ary anisan'ireny aho - ilay mpianatra hafahafa, "hoditra malama". Izy sy ny zazalahy tavoahangy - dadany, saobakaka tanora - nanao dihy toy "Fampisehoana fanafody Shandong" (Sary 4). Ny olona tsirairay manana ny fombany manokana dia natao tamin'ny moron-dranomasina izay nampientam-po kokoa noho ny mpitsara judo, aikido na sumo an'i Japana. Nahita aho a "Zazalahy kely" manao kiraro mitsambikina raha misy olona mandry miaraka amin'ny tongotra havanana, miverina ny tongotra havia. Avy eo a "Zazavavy vavy" nijoro tamina soavaly mitaingina soavaly hametrahana toerana mpiambina misy taolana roa mivohitra. Tampoka teo dia nisy zazalahy iray voadakan'ny hazondamosina hatreo amin'ny valahany - nosakanan'ny a "Tombo-kase Pluto" avy hatrany.
Sary 5: Vo Coc - Nguyen Manh Hung
Avy eo dia nanao fampisehoana koa ilay mpivarotra vatomamy, izay nihaona imbetsaka tany amin'ny tanàna kely. Mbola tadidiko ny lahateniny momba ny varotra mba hitsikerana ireo fotoan-tsarotra "Izay vehivavy rehetra navelan'ny vadiny dia mividiana vatomamy dimy cents fotsiny ary ho tian'ny lehilahy maharitra mandrakizay". Izy dia nivadika ho mpanao haiady ho an'ny fiarovan-tena. Nitsambikina tamin'ny tany tamin'ny tongony iray izy niaraka tamin'ny tehina teo amin'ny sorony. Satria nitsambikina tamin'ny tongony iray izy ka nianjera niaraka tamin'ny tehina. Tsy nampoizina fa nanao haiady tamin'ny soroka nataony izy ary nitodika tany an-danitra ny tongony. Ny sakany - ny tongony hazo - nanidina toy ny tampon'ny fihodinana.
Taty aoriana dia noheveriko ho maoderina "Hiphop". Ny fomba matanjaka indrindra rehefa nivoaka izy. Tamin'izany fotoana izany dia nisy mpianatra iray nitondra azy dummy hazo izay nanintona ny lohany ho ambony noho izy fotsiny tamina teboka mainty teo afovoan'ny handriny. Ilay zazalahy mpianatra iray hafa dia vovoka tamin'ny kitrokeliny - Nisy taolana roa nipoitra teo amin'ny kitrokely havia sy havanana. Hatao inona? Izaho tsy nahalala.
Nanao fampisehoana an-tany tahaka ny nataon'ireo zazalahy tavoahangy teo aloha izy. Avy eo nifikitra ny tongony havia ary nitsambikina ny tongony havanana ary nodakan'ny kitrokely ankavanana nanohina ny handrin'ny dummy teo amin'ny teboka mainty nisy teboka fotsy. Avy eo dia nitodika izy rehefa nikasika ny tany ny tongony havanana, nianjera indray ny tongony havia ary nitsambikina ny tongony havanana ary nodakan'ny kitrokelikely havanana nikasika ny handrin'ny dummy mba hanaovana pentina fotsy hafa teo afovoan'ny handrina. Tahaka izany, nikasika ny afovoan'ny handrin'ny dummy izy tamin'ny taolana roa avy amin'ny kitrokely. Raha tsy dummy izany dia maty avy hatrany ny lehilahy. Inona ilay teknika? Nanontany tena aho.
Indray andro dia nanontany azy aho: "Inona ny zavakanto an-trano?" Ny foto-kevitra ethereal dia toa majika, ary voalaza fa "ny manao fanazaran-tena ho an'ny hozatra mampihetsika" izay tsy afaka nokapaina antsy? Hoy ny reniko, "Izany no fampisehoana fanafody haiady Shandong - hamitahana ny olona rehetra hanaovana dokambarotra amin'ny fivarotana" bibilava plastika voamarika ". Nihalehibe dia fantatro fa mandritra ny fotoan-tsarotra, indraindray ny zavatra tsy mety dia marina, fa ny marina indraindray diso…
Ka moa ve ny "haiady gong" dia fomba fanaon'ny taloha hanambatra ny fanorana amin'ny fanafody sy ny fampiharana ny hozatra hahatonga ny hoditry ny olona ho lasa hoditr'omby, hoditr'omby nefa tsy hotapahina?!… Ao no misy qigong afaka miady amin'ny bibidia na bandit.
Zavakanto maritaly anatiny dia heverina ho fomba matotra mahomby. Raha ny marina, ny sampana rehetra amin'ny kanto martialan'ny zanak'olombelona, ​​tsy ireo ihany Sekolin-javakira martianina. Izany no misy "Fomba miafina" isaky ny sekoly martial arts izay Bodhidharma, mahay sangan'asa tsara tompony amin'ity karazana ity, mba hitazonana ny herin'ny qi alohan'ny hiadiana. Izay midika: "Ny tanjaky ny hozatra sy ny hery ara-batana dia ho faly hampihena na ho reraka raha tsy zatra!"
Fomba telo: toe-tsaina, toe-batana sy ny finiavana hiara-hivondrona mba hamorona tanjaka sy faharetana tanteraka hampihatra isaky ny toerana sy toerana rehetra. Amin'izao fotoana izao dia zatra nanery ny eritreritra ireo mpikatroka haiady fa mahatonga ny fahaveloman'ny sela dia avy amin'ny "dantien". Io no ivon'ny hery misinton'ny vatana izay misy ny fandanjana miasa amin'ny vatana dia miverina amin'ny teboka fanombohana.
Mba hampandehanana ny maha-zava-dehibe, ny olona dia mila manao 12 fipetrahana seza (Sary 5) azo fehezina tsy tapaka mba hisorohana ny saina tsy manaitra ny fihetseham-po tsy hitandrina ny fihetseham-po, ny fihazonana ny fahamarinan-tsaina, ny toe-tsaina voajanahary ho an'ny angovo. Nilaza tamiko izy: "Rehefa avy voaofana tahaka izany ny olona iray dia mety hitondra vatam-paty matanjaka amin'ny vatany, na bara vy handona azy".
Mba hianatra ny rehetra Vo Coc, Nampianarina ny toerana esoterika tamin'ny 1969 aho(1) novakiako gazety momba ny fitsipiky ny haiady sy ny fomba fiofanana ho an'ny haiady madiodio, izay nandalo na saika mitovy amin'izany! Asehoko amin'ireo mpamaky fa tiako izany.
Tao anatin'ny andro farany, rehefa nihalehibe aho dia nahatsapa fa raha voataonan'ny Jujitsu Japoney, Japoney Aikido sa tsia? Ankoatr'izay, mety ho nianatra teny sinoa "qigong" izy. Araka ny Vo Coc, Nihevitra aho fa voataona ny haiady afrikanina na Azia Atsimo Atsinanana izy.
Tamin'izany fotoana izany no nieritreretako fa tsy nieritreritra aho fa mety ho avy amin'ny toerana sasany, amin'ny fe-potoana sasany na amin'ny angano sasany ao Shina.
Niresaka izy indraindray “Avelao hitsoka ny fahefan'ny mpanohitra, avy eo hanjakao”. Midika izany fa rehefa manafika izy, dia manalavitra antsika avy hatrany isika. Avy eo izy dia malemy noho ny fahaverezan'ny fifandanjana, maka fotoana hanohitra ny counterattack isika.
Nijery azy aho, fa raha ny marina, dia nijery ny rantsan-tongotra sy ny rantsan-tanany. Ny fomba nampiofanany fa toa ny tsaramaso nampiasainy izy ireo "Mamely amin'ny toerana mampidi-doza". Inona no toerana mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona? Tamin'izany fotoana izany dia mbola kely loatra aho ka tsy hahatakatra na inona na inona! Taty aoriana, tao amin'ny Oniversiten'i Saigon dia nanandrana nitady asa aho "Boky anatiny emperora" izay namaritra faritra 108 ary nizara ho telo karazana: ratra maty, toerana tsy azo ihodivirana ary velaran-tany mivantana. Rehefa mikendry ny maty raha tsy maty eo no ho faty dia mety ho faty izy avy eo. Ireo maty tsy mifantoka any an-doha, tratrany, hazondamosina, fa koa eo amin'ny tanana na tongotra toy ny toerana eo afovoan'ny tongotra (hoy dung tuyen), ny toerana eo amin'ny palma (huyet lao cong). Hitetika ny toerana tsy azo tsapain-tanana eo amin'ny sandry, tongotra, soroka taolana, ary na dia tsy maty aza dia very saina ny mpifaninana. (Sary 6, 7)
Sary 5: Fipetrahana seha
Ankoatra ny ny akany, misy toerana mampidi-doza eo amin'ny vatan'olombelona ao amin'ny tonon-taolana izay mifantoka amin'ny rantsantanana, ny tenda, ny tongotra, ny elatra, ny soroka ary ny lohalika. Ny mpanazatrana kanto japoney matetika dia manafika amin'ny fivadihana, miondrika ao amin'ny vatan'olombelona. Ireo mpanao jujitsu matetika misambotra, mitazona - antsoina hoe Chin Na - (Figure 8) ny hozatra eo amin'ny sandriny (antsoina hoe hozatra hozatra), na eo afovoan'ny satroka. Na dia ny lamosin'ny tanana Jujitsu dokotera aza afaka manindry, manintona.
Vantany vao hitako ilay mpampianatra nanao didpush-upsby rantsantanana 10 sy rantsan-tongotra 10 novakiako dia io no fomba fanaon'ny tigra. Ho maharitra mandrakizay raha miresaka sy miresaka momba ny haiady, saingy manontany tena aho hoe: "Inona ny artial martial?"
Inona ny ny sampan'ny haiady or ny fandinihana ny basy fa ny olona no namorona azy ireo?
Sary 6, 7: Ny toerana misy ny akupunktur-point-on-the-back-of-the-body-the-location-of-acupuncture - teboka 8 eo anoloana ny vatana
Nieritreritra foana aho…
1st, 1969 (Saigon).
2. Profesora mpiara-miasa, Doctor of History.
(Loharano: Ireo mpisava lalana nanamboatra ny làlana ho an'ny haiady nentin-drazana Vietnamianina ho an'izao tontolo izao - Fizarana 3)
◊ Mitady ny "Vo Coc" - Vi-VersiGoo
◊ Mitady ny "Vo Coc" - Fr-VersiGoo
(Visited 2,486 fotoana, 8 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← MASTERS izay naneso ahy hoe "VO COC"
Ny Tany Masin'i Viet Nam Studies - NY TENINY →
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 5
Comments Off momba ny TANTARA fohy momba ny fanoratana VIETNAMESE - Fizarana 5
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,951)
Comments Off amin'ny Handeha ho an'ny TERT CEREMONIES - Fizarana 2
Fitsidihana anio: 332
Andro farany 7 nitsidika: 2,151
Total visits: 420,205